Vondrona ao amin'ny Deviantart izay tokony harahin'ny mpampiasa Linux | Avy amin'ny Linux
Vondrona ao amin'ny Deviantart izay tokony harahin'ny mpampiasa Linux tsirairay
Izy ireo dia Rohy | | Fisehoana / personalization, soso-kevitra
Ho an'ireo izay tsy mahalala hoe inona izany deviantART dia, raha fintinina, pejy iray anehoan'ny olona ny sary an-tsary an-tsary toy ny sary, sarimiaina tselatra, zavakanto nentin-drazana amin'ny lafiny rehetra, sns.
Amin'ity lahatsoratra bilaogy ity dia hanome torohevitra ny vondrona tsara indrindra (farafaharatsiny ireo fantatro sy arahiko) izay tokony harahin'ny mpampiasa Linux rehetra hahitana lohahevitra ho an'ny tontolo iainany, ny sary famantarana, ny sary, sns.
Fanamarihana: Mba hisorohana ny fanatisme dia tsy nametraka vondrona natokana ho an'ny fizarana na tontolo iainana iray aho.
Forum Screenshot Linux: Iray amin'ireo mavitrika indrindra. Azonao atao ny mahita ny sary an-tsary, lohahevitra ho an'ny Gnome, KDE, kanelina, Fluxbox, Openbox, sns.
Desktop Blackbox: Mifantoka amin'ny tontolo minimalista (Openbox, Fluxbox, sns)
LinuxLounge: Vondron'olona mavitrika iray hafa ary misy fitaovana ho an'ny tontolo iainana samihafa.
Linux manokana: Vondron'olona mavitrika iray hafa miaraka amina fitaovana marobe amin'ny tontolo samihafa.
Wallpaper ihany: Mivondrona amina sary an-tsary maro be.
Avy amin'ny Linux: ary mazava ho azy, tsy afaka mitsahatra ny manome sosokevitra ny pejinay izahay.
Ireo no vondrona atolotro anao. Raha mahafantatra pejy mendrika azy ianao dia azonao apetraka ao anaty hevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Vondrona ao amin'ny Deviantart izay tokony harahin'ny mpampiasa Linux tsirairay
Rohy tena tsara. Noteteziko izy ireo, saingy mendrika ny hijerena akaiky kokoa izy ireo. Tiako ny ampahan'ny "Linux Distro's sy izay eritreretiko" izay anehoan'ny iray amin'ireo afisy ny distro misy ifandraisany indrindra sy ny toetrany milamina. Miombon-kevitra tanteraka amin'ilay mametraka ny laharana N.1 aho; izay manamafy ny isa Distrowatch.
Nokapohin'i "Ubutnu" sy "Saybyon" aho. Ho fizarana sinoa izany raha ny fahitako azy.
Eto raha afaka maneho hevitra ianao ary ao amin'ny paositra command "dd" tsia ... misaotra an'ireo lahatsoratra roa !!! Handinika ireo vondrona ireo aho 😉
Tsy afaka maneho hevitra amin'ny lahatsoratr'i DD?
Raha ny tokony ho izy, miresaka momba ny vondrona manaraka, efa voamarikao ve fa voarara ny hiranay? ... :)
Mametraha Pantheon Files ao amin'ny Ubuntu (manager manager)
Pantheon Files File Explorer
Efa mandinika an'io aho, misaotra amin'ny fanamarihana 😉
Azafady, atsaharo ny fanehoan-kevitra momba ireo zavatra tsy misy ifandraisany amin'ilay lohahevitra.
hahahahaha ... raha nisy izany dia hitsahatra tsy ho Linux
Mbỳ Izy ireo dia Rohy... tsy tombontsoako ny maka an-keriny ny lohahevitrao, fa satria momba ny fanarahan-dia ity raharaha ity dia nanararaotra aho miampanga hevitra fa ny hafa izahay manadihady izy ireo Dan "manara-penitra" tena ara-potoana.
Miarahaba ary averiko ny fialantsiny azafady noho ny fidirana an-tsehatra.
Tena kely dia kely ny devianart ampiasaiko, fa hanaraka ireo vondrona ireo aho hahitako hoe ahoana
albiux_geek dia hoy izy:
Vondrona tsara, eny. Ny sasany izay mitabataba be dia ireo izay mikendry ny GIMP, izay na dia miresaka an'io ho toy ny programa aza izy ireo fa tsy mifantoka amin'ny distro dia hita fa tsara izy ireo.
Azoko apetraka farafaharatsiny izy ireo hoe iza ao aminy aho na nomeko azy ireo ny famantaranandro ary ampiany raha tian'izy ireo: 3
Valio i Albiux_geek
Ny sasany amin'izy ireo dia efa fantatro, ity lohahevitra ity dia tena mahaliana ary ezahiko jerena daholo izy ireo
Ary ny fanararaotana ilay hevitra dia mila fanampiana amin'ity olana ity aho dia manantena aho fa misy olona afaka manampy ahy
Te-hametraka lubuntu aho saingy nianjera ilay mpamaky cd ary tsy manana fanohanan'ny bios aho hanombohana avy amin'ny usb
Nanandrana programa antsoina hoe PloP aho (izay mamela ny mifanentana manomboka amin'ny usb amin'ny masinina izay tsy manohana azy amin'ny biôs) fa rehefa mampifandray ny usb dia mihidy ny Bios ary tsy mandroso raha tsy esoriko ny usb ary noho io olana io dia tsy afaka aho hampandeha azy
Ny vahaolana tokana azoko eritreretina dia ny fanaovana fizarazaran-tsipika amin'ny kapila mafy ary alefa tahaka izany ny mpametaka lubuntu ary avy eo mandehana any.
Ahoana no ahafahako manao izany?
Azo atao ve izany?
Raha azonao atao ny manazava amiko ny fomba fanaovana azy dia hankasitrahako izany
Mamaly an'i The Pixie
Salama re olona, ​​manana kaonty ao amin'ny DevianART aho izay amoahanako ny fanoratan-dry zareo izay nosoratana tamin'ny Gtk 3.4.
Ary koa, namorona fonosana kisarisary antsoina hoe Kalahari icons sy Mate-with-Mint aho
ary ny tambajotra sosialy Diaspora? Tsy mbola nahita pejy nampiroborobo an'ity tambajotra sosialy vita tamin'ny rindrambaiko maimaimpoana ity aho, tsy nahita afa-tsy fampielezankevitra madio tamin'ny tambajotra sosialy manokana sy mihidy: /
Ny fatiantoka ratsy na ratsy izay raha ny hevitro dia manana SolusOS
Lightread: mpamaky RSS tsara ho an'i Google Reader